Iincwadi ezilungileyo kakhulu kwiimfazwe zeNapoleonic
Ukususela ngo-1805 ukuya ku-1815 enye yezona zikhulu zembali zembali zazilawula iYurophu; igama lakhe linguNapoleon Bonaparte . Iimfazwe ezibizwa ngegama lakhe ziye zaphazamisa ihlabathi ukususela ngelo xesha, kwaye kukho uninzi lweencwadi ezikhoyo; oku kulandelayo kukhetho lwam. Ngenxa yomdla kwi-Battle of Waterloo njengomcimbi ngokwawo, ndijongene nesihloko kwoluhlu oluhlukileyo, olufumaneka apha .
Ukuvakaliswa ngokubanzi njengomsebenzi owodwa ogqwesileyo omnye kwiimfazwe zeNapoleonic, incwadi enkulu kaDavid Chandler kulula ukuyithatha. Ukugcina isicatshulwa ngokulula ukufunda kwiimvavanyo, amaqhinga kunye neziganeko, le ncwadi iqulethe inkcazelo yolwazi. Nangona kunjalo, ndiyakuthanda ukufunda oku kunye ne-atlas efanelekayo (jonga ngezantsi), kwaye ubukhulu becala bungenza le ncwadi ingafanelekanga kwabanye.
Oku kufutshane kakhulu kuneCandler kunye nomsebenzi wokuqala wokuqala oya kuchaza kakuhle impi. Kukho ukuphahlazeka, njengoko kunokuqala ukuqala kwaye unokuba ufuna ezinye iincwadi ukuchaza imvelaphi yempi yaseNapoleon ... kodwa uya kuthemba ukuba uyayifumana into enomdla kwaye uzame ezinye iincwadi!
I-Osprey idibanise umqulu waloo mqulu we-'Iimfuneko ezibalulekileyo 'kulo mqulu owodwa, ngoko ufumana umzekeliso ocebileyo wokuhamba kunye nomlando onqabileyo. Ndiyathanda indlela i-Osprey iye yafumana abantu abangenakuyithanda i-Chandler, okanye iWest, kwaye bayidumise ngayo. Abanye bayakufuna ubunzulu obunzulu.
Lo ngumqulu okhulu kakhulu, kunye neenyawo eziphezulu kunephepha le-A4, kunye ne-inch ngobukhulu. Ingxelo ekhuselekileyo yempi yeeNtsholongwane zonke zeNapoleonic ihamba kunye nenqanaba elikhulu leemephu, ezibonisa iimkhankaso, iimfazwe kunye nokunyuka kwamagosa. Iimephu zingabonakala zibuhlungu ekuqaleni kokubona (usebenzisa i-palette encinci), kodwa azinjalo!
Lo msebenzi weklasi uhlanganisa abalawuli abahamba phambili emkhosini waseNapoleon: iiMarhall. Bodwa bodwa into ebangelisayo kunye neyinkimbinkimbi, egcwele abantu abanengxaki, kwaye oku kuncedisa kakhulu kumlando jikelele.
Incwadi malunga nezinto abantu abahlala belibale empini: uqoqosho, ukunikezela, umbutho. Oku akusiyo isifundo sempi sempi kaWellington, kodwa uviwo olunzulu malunga nendlela iBritani ekwazi ngayo ukuhlala ekulweni ixesha elide, kwaye ekugqibeleni ibe phakathi kwabaphumeleleyo.
Ngelixa iingxelo ezininzi zeempi zeNapoleonic zigxininisa kwiimpawu zendlela kunye nokunyuka kweempi, lo mqulu ufikelela kwizinga elongezelelweyo - amava asebenzayo kwimikhosi ngokwawo. Ukusebenzisa iileta, idayari kunye neminye imithombo eyimvelaphi, uMuir uhlola indlela amajoni kunye nabalawuli abasabela ngayo entsimini, ukuphumeza imiyalelo yabo ebusweni bodaka, izifo kunye nomlilo we-cannon. Ukufunda rhoqo ngokucacileyo.
Incwadi yephepha le-1100 ngokwenene iqoqo lezinto ezintathu ezixhamliweyo: NgoMatshi eMoscow, eNapoleon eMoscow, i-Great Retreat, bonke abavakalisa ibali likaNapoleon lokuhlasela eRashiya ngo-1812. Kukho inkcazo, uhlalutyo, kunye neengxelo zokuqala, kwaye ngumsebenzi obalaseleyo.
I-Zamoyski iyinkwenkwezi ephakamileyo yeembali ezidumileyo, kwaye le ncwadana, i-pacy, i-akhawunt, i-alternate ekhethiweyo enye incwadi kule ncwadana malunga nenhlekelele yeNapoleon eRussia ngo-1812. Inokuthi ibe nexabiso elincinci, kodwa akubonakali ukuba kubhaliwe, kwaye awuveki ukuba 'uhambe ixesha elide' no-Austin, njengoko le nto iphezulu yezinto zeklasi.
Imfazwe phakathi kweNapoleon kunye nentshaba yakhe eSpeyin nasePortugal mhlawumbi ifumana ingqalelo kunokuba ifanelekile eNgilani, kodwa le yincwadi yokufunda ukuzisela ukukhawulezisa. Yazisa iGates ebantwini kwaye ibali lezilumkiso zezobupolitika kunye nemikhosi yemikhosi.
Kukho iincwadi ezimbini ezinikezelwa ngo-1812 kuloluhlu, kodwa uLieven uhlanganisa umkhondo waseRashiya olandelayo eParis kunye nendlela abaRashiya abaye badlala ngayo indima ebalulekileyo ekunqothulweni kukaNapoleon. Inengqiqo, ingqiqo kunye neenkcukacha, unokubona ukuba kutheni ibhaso liphumelela.
Le nto ibaluleke kakhulu kwinqanaba elilodwa lokuqala lababini bemigqabi abafuna ukupenda iiyunithi kunye nabafundi abangathanda ukucinga ukuba bafunyenwe kwezinye iincwadi. Nangona kunjalo, ngoku kuyabiza kakhulu ukuba awuzukufumana inhlanhla.
Unokuqonda indlela u-Zamoyski enza ngayo i-1812, kodwa unokuzibuza ukuba wenza njani efanayo kwiCongress of Vienna eyayilandela uNapoleon. Ingqungquthela yesiganeko sentshukumo, umzobo webalazwe wehafu, i-congress iqulunqa le nkulungwane ilandelayo kwaye nguyomqulu wokugqibela ogqityiweyo.
Andiyikunyaniseka ukuba ndibandakanye incwadi kwinqanaba elidumileyo leli xesha, kwaye u-Adkins unomsebenzi onamandla wesinema. Ngokwenene lifaniswa ne 'Stalingrad' enkulu, ephakamileyo indumiso kule ndawo.
IiMiskets? Rifles? Esi sikhokelo kuzo zonke izixhobo oza kuhlangabezana nazo kwezinye iitekisi, kwaye yintoni impembelelo ababenayo kwiimfazwe. Amacacisa, ukubonelela kunye nezinye izinto ezininzi zihlanganiswe ngendlela elula.
Ukusebenzisa ingxelo ekhankanywe ngobuninzi beemfazwe zeNapoleonic, uHorne uxoxa ngendlela uAusterlitz eyayiye ngayo eyinqoba enkulu yeBonaparte, kodwa ibonisa ukuhla kokugweba kwakhe: i-hubris eyayikude kangakanani inokubethwa?
Iimpi zeNapoleonic zazingekho nje ngeemfazwe, kwaye le mqulu ibonisa iingxoxo ezininzi zentlalo, ezenkcubeko nezopolitiko ezithatha iimbali-mlando. Ngenxa yoko, le ndlu yindlela enhle kakhulu yokwandisa ulwazi lwakho ngaphaya kweengxabano ngokwayo. Imiba ibandakanya 'Ngaba uNapoleon wenza ingcamango yokuguqulwa kweFrench?' kwaye yintoni na ixesha elide uMlawuli ayenayo eFransi?
Oku kuyintando yam eyona nto: isikhokelo sokuthi iinqununu zafuduswa, zaqhutywa kwaye zenziwa ngexesha leemfazwe, ngumntu oye wahlala ethanda i-wargamers. Ngelishwa, akushicilelwe ukususela ekubeni ndithenge mna kwaye kungabiza kakhulu. Omnye kumfundi ozinikeleyo.
I-classics yenkcazo yexesha lonke isetyenziswe eRashiya ngexesha leemfazwe zeNapoleonic, ikakhulukazi ngo-1812. Kunzima kodwa akunzima kakhulu emva kokuba uphelile kwiphepha elingamakhulu amabini xa amagama amaninzi ephonswa kuwe. UTolstoy uye wadunyiswa ngenxa yezinto ezibonakalayo zokulwa (oko kukuthi utyhafile) kwaye ndikholelwa ukuba kukhanyisa, abafundi beemvelo nabanamandla mabazame.
I-Schmalkaldic League: iMfazwe yeNguquko
I-Concordat ka-1801: iNapoleon neCawa
Ngaba Abantu Bangexesha Eliphakathi Bakholelwa Kwihlabathi Elinyeneyo?
IiNqaba, iiNqaba, nePalase - Iifoto ezikhethiweyo
Konke malunga ne-NCAA
Indlela yokudibanisa iLwimi elithi "Camminare" ngesiTaliyane
Funda indlela yokuxelela ixesha kwiFrentshi
I-Daisy Duke's Jeep KwiiDukes zeHazard: "Dixie"
Amacandelo e-Watercolor: Ukuhlambalaza (Ukutshisa)
Indlela yokufumana uMphakathi C kwiPiano
Imibuzo engacacanga ye-ESL
Ukuqala kwesiFrentshi UkuFunda izibonelelo
Iifayile ezili-10 eziphambili kakhulu ezihlaseleyo zexesha lonke
Iirekhodi Zamaxesha onke